Alan Shearer Oo Cadeeyay Daciifnimada Ugu Weyn Ee Heysata Kooxda Man United
Home Horyaalka Ingiriiska Alan Shearer oo cadeeyay daciifnimada ugu weyn ee heysata kooxda Man United
Alan Shearer ayaa aaminsan in Manchester United ay ku qasban tahay inay kala saarto daafaceeda hadii ay doonayaan inay noqdaan koox guuleysata inta uu hogaanka u hayo Ole Gunnar Solskjaer.
Red Devils ayaa xilli ciyaareedkaan ku guuleysatay inay u tartanto hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkaan iyagoo qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay, laakiin waxay hoos uga dhaceen kulamadii ugu dambeeyay.
Man United ayaa haatan isku aragta kaalinta 2-aad ee kala saraynta horyaalka premier League waxana ay 5 dhibcood ka dambaysaa kooxda hogaanka haysa ee Man City.
Wiilasha Solskjaer ayaa kaliya awooday inay guuleystaan ​​labo ka mid ah shantii kulan ee ugu danbeysay ee ay ka ciyaareen horyaalka heerka koowaad taasi Manchester City u fududeysay in hogaanka ay qabato.
Manchester United ayaa durbaba laga dhaliyay 30 gool oo Premier League ah ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkaan xiddigii hore ee England Shearer ayaa aaminsan in jilicsanaanta dhanka daafaca ay walaac weyn ku qabaan Red Devils.
Previous articleBarcelona oo war kasoo saartay in Philippe Coutinho uu u ciyaaro Xili Ciyaareed kale
Next articleTrent Alexander-Arnold ayaa ka hadlay qaab ciyaareedkiisa ‘xun’ ee Liverpool FC